Politika momba ny tsiambaratelo - Ivotoerana fitsaboana ny homamiadana any California Protons
NY FOMANANTSIKA HO AN'ANDRIAMANITRA
Ny California Protons Cancer Therapy Center (California Protons) dia namolavola sy nanatanteraka ireo politika ireo mba hanehoana ny fahavononany amin'ny tsiambaratelo. Ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia natao hanampiana anao amin'ny fahatakarana ny fomba hanangonantsika, hampiasantsika, hizara ary hiarovantsika ny mombamomba ireo angoninay sy hanampiana anao amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny alàlan'ny fampiasana serivisy amin'ny alàlan'ny tranokalanay (ny “Site”).
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranokala, manaiky ny fanangonana sy fampiasana ny vaovao araka ny voafaritry ny Politika momba ny fiainana manokana izahay. Raha tsy ekenao ny fepetra rehetra momba an'io politika momba ny fiainana manokana io, dia tsy tokony hampiasa ny serivisy na ny Site izahay.
Manangona sy mandeha ho azy avy hatrany izahay ary mitahiry ny adiresy IP sy ny anaran'ireo mpitsidika rehetra ao amin'ny tranokalanay. Izahay koa dia manara-maso ireo pejy izay hitanao ao anatin'ilay tranonkala, ny daty sy ny fotoana ahitanao ireo pejy ireo, ny antsipiriany momba ny fomba ampiasanao ilay tranonkala, toy ny fangatahana fikarohana, ary ny adiresy IP amin'ny tranonkala izay nampiasanao mba hampifandraisana mivantana amin'ny anay Site. Ny fampahalalana toy izany dia miaraka amina fanaraha-maso ny data avy amin'ireo mpitsidika hafa mankany amin'ilay tranokala. Ampiasainay ity fampahalalana vaovao ity hanampiana anay hanombatombana ny làlan'ny fifamoivoizana sy ny fanatsarana ny tranokala amin'ny alàlan'ny fanaovana izany ho fandraisana andraikitra bebe kokoa amin'ny filan'ny mpitsidika.
FIVORIANA MANOKANA TONTOLO MBENTIFIABLE
Manangona sy mitahiry fampahalalana azo fantarina manokana izahay toy ny anaranao, ny adiresy, ny laharana an-tariby ary ny adiresy mailaka rehefa omena anay ao amin'ilay tranokala. Amin'ny alàlan'ny fampidirana vaovao amin'ny iray amin'ireo sehatra ireo, omenay alalana hifandray aminao izahay momba ireo vokatra sy orinasa voafidy ary hetsika izay heverinay fa mety hahaliana anao.
Ny tranokalanay dia mampiasa cookies na teknolojia mitovy amin'izany hanangonana sy hitahiry vaovao rehefa mitsidika ny tranokalanay ianao na mifandray amin'ny serivisy atolotra. Azontsika atao ny manangona sy mitahiry mofomamy, izay rakitra rakitra kely, eo an-toerana amin'ny fitaovanao. Mampiasa cookies na teknolojia mitovy aminy izahay hanamora ny fitsidihanay ny tranokalanay. Ny Cookie dia ahafahantsika mitahiry ny safidy tianao omena anay. Manampy antsika hanangona ny angon-drakitra mikoriana tsy fantatra anarana ny Cookies mba hitadiavana ny fironana sy ny modely mpampiasa. Ny ankamaroan'ny mpanamory dia ahafahanao manova ny fisafinao hamehezana tanteraka ny mofomamy, hampandeha anao isaky ny mandefa azy izy ireo, na avelao ampiasain'ireo tranonkala ireo izay nofidinao ihany. Azonao atao ny mamafa ny mofomamy izay voatahirinao ankehitriny. Tokony ho fantatrao fa ny faritra na fiasa sasany ao amin'ilay tranokala dia mety tsy mandeha araka ny tokony ho izy raha toa ka ametrahanao ny browser tsy hanaiky mofomamy.
INONA NO AZONAO TOEVITRA NY FIKAMBANANA VOAVITRA IZAY
Mampiasa ny fampahalalana amam-potoana izahay hanampiana anay handinika ny làlan'ny fifamoivoizana mitsidika ary hanatsara ny tranokalanay amin'ny alàlan'ny fanaovana azy ho fandraisana andraikitra bebe kokoa amin'ny filan'ny mpitsidika. Ny fampahalalana manokana azontsika tadiavina dia ampiasaina amin'ny fametrahana ny fangatahana ao amin'ny tranokalanay, ahafahanao miditra amin'ny serivisintsika na ny mombamomba anao, manome, mihazona, miaro, mampivoatra ary manatsara ny serivisy na ny mombamomba anao, ary mifandray aminao. Ampiasainay ihany koa ny fampahalalana azo fantarina manokana izay angoninay mba hifandraisana aminao momba ny vokatra sy serivisy mety mahaliana anao.
INDRINDRA NY FAMPISORISANA NY FIKAMBANANA VOAVITRA IZAY
Tsy hivarotra, manofa, mizara, na raha tsy izany, hanambara ny mombamomba anao manokana avy aminao na azonao amin'ny alàlan'ny fampiasanao ny tranokala amin'ireo antoko fahatelo ho an'ny fahazoan-dry zareo mamela ny tsenany na ny serivisinao aminao. Azontsika atao ny manambara ny fampahalalana anao amin'ny orinasa izay manolotra serivisy fanohanana anay toy ny mpanonta na trano alefaso manampy anay ny tsenan'ny vokatra na serivisintsika, na ny Host web na ny mpamorona manampy anay hamorona sy hitahiry ny tranokala. Azontsika atao ny manambara ny mombamomba anao manokana amin'ireo olona mifandraika amin'izany sy ireo miasa amin'ny maha-solika anay anay amin'ny fanomezana ny serivisinao aminao. Azontsika atao ihany koa ny manambara ny mombamomba anao manokana: (a) ho valin'ny fangatahan'ny manampahefana eo amin'ny fanjakana na fanjakana na federaly; (b) ho valin'ny fitsarana, na fitantanana, na fizahana mitovy amin'izany toy ny tenina; (c) rehefa takian'ny lalàna; na (d) amin'ny toe-javatra manokana toy ny valin'ny fandrahonana ara-batana na fandrahonana ara-batana ho an'izay olona tsirairay na hametraka ireo fepetra amin'ny fampiasana ity tranokala ity.
Imbetsaka no jerena ny asantsika sy ny fomba fiasa ataonay momba ny fanarahana ireo fitsipika sy fomba fiasa mifehy ny fiarovana, tsiambaratelo, ary kalitao ny mombamomba antsika. Ny soatoavin'ny orinasa, ny fenitry ny etika, ny politika ary ny fomba amam-panao dia manolo-tena amin'ny fiarovana ny mombamomba ny mpanjifa. Amin'ny ankapobeny, ny fomba amam-pandraharahantsika dia mametra ny fidirana amina mpiasa amin'ny fampahalalana tsiambaratelo ary mametra ny fampiasana sy ny fampahafantarana ireo fampahalalana toy izany amin'ny olona nomena alalana, ny dingana ary ny fifanakalozana. Azontsika atao ny manambara vaovao rehefa terena ara-dalàna hanao izany, amin'ny teny hafa, rehefa mino, mino izahay fa mitaky izany ny lalàna na ho fiarovana ny zontsika ara-dalàna.
Ny fehezan-dalàna momba ny fampiasana an'i California, izay mety miova tsindraindray, dia ampidirina ao anatin'ity Politika miafina ity.
LOHATENY IREO FIVORIANA
Ity tranonkala ity dia misy rohy mankany amin'ny tranonkala Internet hafa. Tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatin'ny tranonkala hafa izahay, ny fomba fanaovana tsiambaratelo amin'ny tranonkala hafa, na ny fomba itondrany ny mombamomba ny mpampiasa azy. Manoro hevitra izahay hamaky ny mpitsidika hamaky ireo politikam-pon'ny tsiambaratelo amin'ny tranokalan'ny Internet hafa izay vangiany mba hamaritana ireo fangatahana fampahalalana ataon'ny orinasa sy fikambanana hafa. Ity Politika momba ny fiainana manokana ity dia mihatra amin'ny Proton any California ihany ary amin'ny fampiasana ny tranokala.
Manaiky ianao ny hiaro, hanomezana tsiny ary mihazona ny California Proton, ny mpiara-miasa ao aminy, ny manampahefana, ny talen'ny mpiasa, ny mpiasa, ny mpandraharaha, ny fahazoan-dàlana, ary ny mpamatsy, tsy manisy ratsy, ary manohitra fitakiana, hetsika, fangatahana, fahavoazana, fatiantoka, ary fametrahana, anisan'izany, tsy misy fetra, ara-dalàna ny saram-panjakana sy ny kaonty vokarina na voalaza ho vokatry ny fanitsakitsahana ny Fampiharana fampiasana na ny politikam-panao manokana.
Izahay dia manana ny zo hanova, hanova na manavao ity Politika momba ny fiainana manokana ity amin'ny fotoana rehetra. Na misy fiovana, fanovana na fanavaozana manokana momba ny Politika momba ny tsiambaratelo ity dia miasa avy hatrany eo amin'ny famoahana ity tranonkala ity. Mampirisika anao izahay hamerina hijery ity politikanao momba ny tsiambaratelo ity mba hahafantaranao ny fiovana, fanavaozana na fanavaozana. Ny fampiasana anao amin'ny tranokala dia midika hoe manaiky ianao ary manaiky hifanaraka amin'ireo fanovana, fanovana sy fanavaozana ireo. Ho an'ny fahafaham-po sy ny firesahana ho avy dia voatanisa eto ambany ny datin'ny dikan'ity Politika miafina ity. Izahay dia hitahiry ireo dikan-dàlana ho an'ny zon'ny tsiambaratelo ity amin'ny arisivanao hojerenao.
Mahatsapa izahay fa ilaina ny miaro ny fiainana manokan'ny ankizy izay mampiasa Internet. Ilay tranonkala dia tsy natao na hitondrana ireo ankizy latsaky ny 13 taona. Tsy manangona antokom-pahalalana azo fantarina avy amin'ny ankizy latsaky ny 13 taona mifanaraka amin'ny lalàna mifehy ny fiainana manokana amin'ny ankizy isika. Raha fantatsika fa ny zaza iray latsaky ny 13 taona dia nanome fampahalalana azo ampahafantarina amintsika amin'ny alàlan'ny tranokalanay, dia hofafantsika amin'ny dosie izany. Raha ray aman-dreny ianao na mpiambina ara-dalàna olona iray latsaky ny 13 taona heverinao fa mety nampita ny mombamomba anao manokana izahay, azafady mba mifandraisa aminay ary handray fepetra mety hamafa izany fampahalalana izany amin'ny rakitra izahay.
Tsy azonay antoka hiantoka tanteraka ny fiainana manokana amin'ny serasera mailaka mankany sy any California Proton. Tsy afaka ary tsy manome antoka isika fa tsy ho fantatra na hidirana amin'ireo antoko fahatelo ny atin'ny mailaka. Ireo serasera ireo dia mety ho voasambotra raha tsy ny fahalalanao sy ny fahazoan-dàlana anananao mandritra ny fitaterana na mankany amin'ny tranonkalantsika. Manoro hevitra izahay mba tsy hampiasa mailaka hanomezana vaovao aminay izay heverinao fa misy tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo na saro-pady.
Amin'ny fampiasana ity tranokala ity dia manaiky ianao fa tsy tompon'andraikitra amin'ny (i) ny fampahafantarana ny mombamomba anao manokana anao amin'ny antoko fahatelo amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranokala; (ii) ny fampahafantarana ny mombamomba anao manokana tsy azo tamina tsy ara-dalàna avy aminay; na (iii) ny fampahafantarana tsy nampoizina momba ny mombamomba anao nataonay.
Ny mpitsidika ny tranokalanay dia mety omena fahafahana hisafidy raha hampiasa ny fampahalalana azy ireo amin'ny tanjona sasany amin'ny fotoana iray mangatahanay izany. Ny mpitsidika tsy te handray ny fampiroboroboana na fampahalalana momba ny fotoana atolotray anao dia mety hisafidy ny tsy handray ireo fampilazana ireo amin'ny alàlan'ny hifandraisana aminay amin'ny info@californiaiaprotons.com.
Raha manana fanontaniana, fanehoan-kevitra na ahiahy momba ity Politika momba ny fiainana manokana ity ianao, azafady mba hifandraisa aminay info@californiaiaprotons.com.